Vidiyo 12 - Nhọrọ Ọgwụgwọ Ọrịa | | Ebumnuche (Njikọ Aka Na-emegide Mmụta Mmekọahụ)
Vidiyo 12 - Nhọrọ ndị ọzọ gbasara ọgwụgwọ.
Dysphoria okike, Ndị ọzọ Na-ahụ Maka Ọgwụ Uche / Site mere
Video 12 - Dysphoria nke nwata.
Ndị ọzọ Na-ahụ Maka Ọgwụ Uche.
Mara Mara Editor: Edere vidiyo a na Australia na November 2018, tupu nhoputa ndi ochichi nke na-abịanụ. Y’oburu na ndi otu ndi Australia a hoputara kwere imebi usoro nmeghari akuko, ndi ebum n’uche n’emebi aha ndi mmadu n’ihi ihe aghara aghara okike. Emere ntuli aka a na Mee 2019. A họpụtaghị ọgbakọ Ndị Ọrụ Ọstrelia n'ihi ya ka ewepụrụ mpụ nke ọdụ ndụmọdụ ahụ. Agbanyeghị, oke iyi egwu a na-aga n'ihu Australia ka mba ndị ọzọ jiri nwayọ gbochie usoro ọgwụgwọ a. Na vidiyo a Prọfesọ Whitehall na-ekwu banyere ihe ndị mere gburugburu, na ụzọ ndị e si mee ya, na ndụmọdụ mmụọ nke ọma nke ndị okenye na-agbagha ndị ọrịa na ụlọ ọrụ ahụike gburugburu ụwa.
Nabata na mkparịta ụka a na isiokwu dị oke mkpa nke Childhood Gender Dysphoria. Abụ m John Whitehall. Abụ m prọfesọ nke Paediatrics na Ahụike Childmụaka na Mahadum Western Sydney, mana ị kwesịghị iche n'ụzọ ọ bụla na m na-anọchite mahadum ahụ ma ọ bụ ngalaba m ma ọ bụ onye ọ bụla ọzọ. Ana m ekwu banyere echiche nke m na ajụjụ ọnụ nke mụ na ọtụtụ ndị nne na nna nwere na akwụkwọ m gụrụ na nzaghachi m nwetara site n'aka ndị ọkà mmụta sayensị na mba a, na mba ndị ọzọ, na ekele na mmetụta nke homonụ nwoke na nwanyị na-eto eto.
Gịnị kpatara m ji eme ya? Fọdụ na-asị, “, chọghị ịma maka ụmụaka ndị a.” Site na nke a, m ga-ekwu na ọ na-esiri dọkịta na-ahụ maka ụmụaka ike ịgbachitere onwe ya na paediatrics. Mana ọ bụrụ na m kọwapụta ya, mụ na ụmụntakịrị esonyela kemgbe ihe karịrị afọ iri ise, n'ezie, ana m eche na otu n'ime nnukwu ngọzi nke ndụ m ma a hụ m ya n'anya nke ukwuu. Akpọrọ m ịhụ ụmụaka na-enwe ihe mgbu ma ọ bụ na-ata ahụhụ ma ọ bụ na-arịa ọrịa. Abịara m na nke a n'ihi na ọ dị mfe ịhụ na ụmụaka na ndị ezinụlọ ha na-ata ahụhụ, na nnukwu ihe mgbu, na egwu nke nnukwu nsonaazụ sitere na ọgwụ dị iche iche.
Yabụ, echere m na m ga-ekwu okwu n'ihi na echere m na enwere nchekwube na nke a, na ọtụtụ ụmụaka ga-eto eto na nsogbu a. Nke ahụ abụghị ọnụ ọgụgụ m, nke ahụ bụ ọnụ ọgụgụ ndị ọzọ. Imirikiti ụmụaka ga-etolite na ya, yana isiokwu nke vidiyo a taa, anyị na-ele anya n'azụ na otu ndị mmadụ siri jikwaa ya tupu usoro usoro ọgwụgwọ ugbu a wee pụta. Ha jiri ọgwụgwọ omume, psychotherapy, ọgwụgwọ ezinụlọ na ihe ndị ọzọ, pụta. Ugbu a, ihe m na-eche bụ bụ na echezọwo usoro ọgwụgwọ gara aga na ndị mmadụ na-etinye uche na usoro ọgwụgwọ. Ma dịka anyị ga-ekwu maka, nke ka njọ, ka ụfọdụ ndị ndọrọndọrọ ọchịchị na ndị ndọrọndọrọ ọchịchị si mechie uche ha na ụzọ ọzọ maka usoro ọgwụgwọ wee mee iwu iji mebie ụdị ọ bụla ọzọ nke nwatakịrị ahụ na ọ bụ ezinụlọ.
Nke a bụ mkparịta ụka kachasị mkpa, n'ihi na n'oge na-adịghị anya enwere ike ịme iwu nke ga-egbochi, machibidoro iwu, ọ bụrụ na ọ bụghị ịme vidiyo a, n'ezie okwu anyị ga-ewelite. Ugbu a amaghị m ihe kpatara ndị ndọrọndọrọ ọchịchị ji tinye aka na nke a, mana ọ dị mkpa ka anyị ghọta ya n'ihi na ndị isi na-abịa.
Ọ bụrụ na m nwere ike ịmalite, ana m arịọ mgbaghara n'ụzọ m ga-esi gụọ ụfọdụ n'ime ihe a n'ihi na, m na-ekwu, ọ dịghị onye ga-ekwere ya belụsọ ma a gụpụtara ya. Yabụ, m na-ebido n’otu ikpo okwu nke Federal Labour Party nke 2015. Na isi okwu niile nke a, n’okwu dị iche iche, okwu na-agbagwoju anya, dị ka George Orwell si 1984, “Okwu nwere ike iduhie gị ma na-apụtakarị ihe ndị ọzọ. ” Isi ihe m na - enweta bụ na otu ndị ọrụ na ọkwa gọọmentị etiti yana ọkwa steeti Victoria, na - achọ ime mpụ, ugbu a ọ bụ okwu ha, ọ bụghị nke m. Dị ka anyị ga-ahụ, ha chọrọ ka omee ọgwụ mgbanwe.
Ugbu a, anyị ga-akọwa ihe ọgwụgwọ ntụgharị bụ, mana nke mbụ, ka anyị lelee ụfọdụ n'ime okwu ha anya. Ulo elu nke mba, dika m kwuru, na 2015 na-ekwu, "oru na-anakwere ihe omuma sayensi nke ndi na-ekwu na ha ga-agbanwe ngosiputa nwoke ma obu nwanyi ha bu ndi na-adighi nma." Aga m ewetara gị ihe akaebe, n'eziokwu, na nke ọzọ. Na e nwere ọtụtụ akụkọ na-ekwu na usoro mgbanwe nke ụmụaka agbanweela site na ọgwụgwọ. Aga m ekwu na n'oge a, enweghị ihe mmụta sayensị na-egosi na emebila ụmụaka na usoro ahụ.
Ha gara n'ihu kwuo, "Iji gbochie nke a, iwu ndị dị ugbu a erughị eru." Ya mere, ihe ha choro ime bu, ha choro ime iwu ohuru. Nke a bụ ebumnuche ha. Ya mere, M na-agụ, “Ya mere oru ga,”…. Nke a bụ usoro ikpo okwu nke mba ha n’afọ 2015. “Ọrụ ga-agba mbọ hụ na iwu na sistemụ zuru oke,” iwu na sistemụ, usoro ntaramahụhụ, “ka etinyebere iji hụ nchedo ụmụaka, ndị nọ n’afọ iri na ụma na ndị ọzọ site na ebubo ụgha na mmerụ mmụọ nke - a na-akpọ ọgwụgwọ ndị na-edina ụdị onwe ha. ” Nke ahụ pụtara ọgwụgwọ ntụgharị. Ma dabere na nke abụọ, ana m agbagha azụmahịa a nke nkwupụta ụgha na nsogbu mmụọ. Aga m ewepụta ihe akaebe na psychotherapy ọdịnala bara uru.
Ulo oru a gara n'ihu na ha “choro ihu na,” ha achoghi, “iji hu na ndi isi nchedo umuaka kwenyere ngbali nke nmekorita nwoke ma obu ndi ajuju banyere nwoke na umuaka, bu ihe ojoo nke uche. mkparị! Ọ ga - abụ mkparị dị njọ na uche mmadụ, maka na dọkịta ga - anwale ma tụgharịa nwatakịrị ahụ na okike amụrụ ya. Iko akparama agwa, mebie iwu. Mana enwere ihe akaebe na psychotherapy na-arụ ọrụ.
Ha chọrọ ịga n'ihu ma kweta nsogbu ndị a, mgbe a na-ata ahụhụ n'ime ezinụlọ, dị ka ime ihe ike n'ụlọ megide nwata ahụ. See hụrụ, ha na-esi ebe a na-awa dibia bekee ebe a, na ndi dibia ogwu. Ha na-agagharị, n'eziokwu, n'ime ezinụlọ ka ọ bụrụ na nne ma ọ bụ nna, na-echegbu onwe ya banyere mgbagwoju anya nke ụmụ ha, nke ha nwere ike mụta site na mmemme akpọrọ calledlọ Akwụkwọ Nchekwa ma ọ bụ site na Weebụ ma ọ bụ ihe ọ bụla, ma ọ bụrụ na ndị nne na nna ahụ emela nke ahụ wee nyere aka na ntụgharị uche nke onye na-abụghị nwoke ma ọ bụ nwanyị ibe gị, nke a ka a na-akpọ ime ihe ike megide nwatakịrị. Enweela usoro mpụ dị oke njọ maka onye ọ bụla na-emegbu ụmụaka. Ihe otu mba, usoro ikpo okwu nke Labour Party, na-acho ime bu itule nchegbu nke nne na nna, na mgbali nke nne na nna iji nwaa idozighari nwa ya na okike nke amuru ya, ha na-acho ikwado , na-anwa anwa, ha na-ekwe nkwa, na ha ga-ewere ya na imegbu ụmụaka.
Ndi Victoria Labour Party batara n’ime ihe n’okpuru onye oru ahu ike, Jill Hennessy, edeputara ya na Hansard, ndia abughi okwu m, ndia bu okwu ya dika edeputara na Hansard na ulo oru mgbasa ozi ndi ozo. N'okpuru Iwu Mkpesa Ahụike ọhụrụ, nke mechara kwado ya na 2017, m na-ekwu, "Nke a ga-ehichapụ," ọ na-ekwu, "Nke a ga-eweta ụzọ nke ahụ bụ, ụzọ a ga-esi mesoo ndị na-erite uru na omume rụrụ arụ nke ntọghata mmekọ nwoke na nwanyị. usoro ọgwụgwọ, nke na-akpaghasị uche dị egwu ma na-emebi ahụike uche nke ndị na-eto eto nọ n'obodo anyị. ”
Nke a bụ ọgwụgwọ ntụgharị nke ha na-anwa ime mpụ. Ma na agbanyeghị, ọ bụrụ na ha leghachi anya azụ dịka m nwere ike ile anya n’azụ, ka ị nwere ike ile anya n’azụ, na akụkọ nke iri asaa na asatọ wee rue na ngwụsị afọ ninties, psychotherapy nyere aka nke ukwuu. Enwere akụkọ na n'eziokwu, enwere ike ịmegharị ụmụaka ndị a ka ha bụrụ nwoke na nwanyị.
Ugbu a, gịnị banyere taa? N’ọnwa Disemba n’afọ a, ndị ọrụ gọọmentị etiti na-emezigharị usoro ya na ntinye ya na enwere ọtụtụ ntụaka maka ihe LGBTIQ na ihe transgender. Ma lee ya. "Ndị ọrụ na-emegide omume nke a na-akpọ ntụgharị na usoro iji megharịa ndị LGBTIQ ma na-achọ imebi omume ndị a na mpụ." Mpụ! Ha ga na-emebi ndị dọkịta na ndị ọzọ na-anwa imezi nwa ahụ ka okike okike a mụrụ ya.
Ka m kwuo n'oge a na anaghị m ewetu ahụhụ ụmụaka a na-ata. Anaghị m belata nhụjuanya nke ezinụlọ. Nke a bụ nnukwu nsogbu ọhụrụ anyị nwere ma enwere m obi ọmịiko nye ụmụaka ndị metụtara ya na ndị ezinụlọ ha. Ihe m na-achọ bụ ụzọ m ga-esi dozie nsogbu a, echekwa m na e nwere ụzọ isi mara ihe n’oge ochie. Enwere nsogbu, oke ihe egwu dị na ihe a na - akpọ, ụzọ ọhụụ, nke akpọrọ Dutch Protocol ma anyị kwurula banyere nke a na mbụ.
Ya mere, olee ọgwụgwọ e nyere tupu 1998? 1998! Nke ahụ bụ naanị afọ iri abụọ gara aga. Newdị ọgwụgwọ ọhụrụ, nke ahụ bụ ịsị, na anyị ekwuola maka nke a tupu oge a, na-eme ka mgbanwe nke mmekọrịta nke nwa nwoke na-abụghị nwoke ma ọ bụ nwanyị ibe ya, mgbe ahụ, ntọala nke ndị na-etolite etolite etolite etolite, nke ha na-azọrọ na ọ dị mma, mana enwere ihe akaebe na atụrụ, n'eziokwu, na ọ dịghị mma ma na ọ nwere mmetụta na-emebi emebi na mpaghara nke etiti ụbụrụ nke na-ahazi ụzọ nwatakịrị si eche echiche ma na-emetụtakwa usoro ebumpụta ụwa nke inwe mmekọahụ ka nwatakịrị ahụ wee nọrọ a na-anọpụ iche.
Yabụ, mgbanwe mmekọrịta mmadụ na ibe ya, nke a bụ ihe na - eme ugbu a, ojiji nke ndị na - egbochi ya, yana homonụ nwoke na nwanyị na - enwe mmekọahụ iji kpalite atụmatụ mpụga nke onye na - abụghị nwoke ma ọ bụ nwanyị, ha wee sị, “Ee, enwere ọtụtụ ọghọm ndị a,” mana ha anaghị ekwu okwu banyere mmetụta ụbụrụ.
Ka anyị gagharịa n’ihe anyị kwuru maka ya n’oge a. Menmụ nwoke ndị e nyere estrogens iji kpughee ihe ndị dị na mpụga, ụbụrụ ha na-ebelata na ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ karịa okpukpu iri karịa nke ọnwụ cell. Ha anaghị ekwu okwu banyere nke a. Ọ bụrụ na ị nye testosterone nwanyi, hormone nwoke, ụbụrụ ya na-ebuwanye ibu, mana nke ahụ abụghị ịbawanye ahụ ike. Anyị ga-akpọ hypertrophy ahụ, na-amụbawanye ọrịa. Ọ pụtaghị na ọ na-enweta mkpụrụ ndụ awọ awọ ọhụrụ ma ọ bụ ihe ọ bụla. Yabụ, enwere mmetụta nhazi mgbe ahụ. Nke a abughi ihe akaebe m, nke a dị na akwụkwọ na ọ bụrụ na ịchọrọ ịlele amaokwu, lee isiokwu Quadrant m, ha niile nọ ebe ahụ.
Mgbe ahụ, enwere ihe akaebe a dị ike na homonụ nwoke na nwanyị na-emetụta ụbụrụ. Ma mgbe ahụ n'ezie, ha ga-eduga n'ịwa ahụ, anyị ekwuola banyere ya. Iwepụ ara, dịka ọmụmaatụ, nnukwu mgbanwe nke genitalia, nke gụnyere ịtụpụ ya. Nke a bụ ebe ọ na-aga ugbu a. Gịnị mere m ji kwuo 1998? Maka na ikpe izizi metụtara iji ndị na-egbochi ya bụ naanị na 1998. Achọpụtara ndị gbochiri ya n'afọ ndị 1970. Ojiji ha maka oge uto malitere na 1980, na, maka ojiji a, ọ malitere naanị n'afọ 1998. Anyị na-ekwu maka afọ iri abụọ naanị ahụmịhe n'ụdị ọgwụgwọ ọhụrụ a.
Ya mere, gịnị mere tupu 1998? Ọfọn, nke ahụ bụ ezigbo ajụjụ dị mma, n'ihi na nke mbụ ọ na-eweta na enweghị obere ụmụaka sonyere n'afọ ndị ahụ. Ndị mmadụ gụnyere itinye aka na-agwọ ha. Gịnị mere ha ji chọọ imeso ha ihe? Ọfọn, ha na-akpọ aha, ị nwere ike ịgụ nke a maka onwe gị, ihe atọ. Ha choro ka ha kwusi mgbakwasa na omume okenye nke umuaka. Nke ahụ bụ ịsị na ụmụaka ahụ na-eickingomi, na-ekwubiga okwu ókè, ihe ha chere ma ọ bụ nke dugara na nkwenye, bụ atụmatụ nke nwoke na nwanyị. Yabụ, anyị na-ekwu maka nwata nwoke, gbara afọ asatọ maọbụ iteghete, onye ga-asị na ọ chọrọ ịbụ nwanyị. O yi uwe dị ka nwanyị, ọ na-eje ije dị ka nwanyị, o nwere ọdịdị dị ka nwanyị, ọ na-eji lipstick na ihe ndị ọzọ, ma na-ekwubiga okwu ókè. Ọ bụghị naanị nwatakịrị nke asatọ na-eche na ọ bụ nwa agbọghọ, mana nke a bụ nwata nke asatọ nwere ụzọ ma ọ bụ ndị ọzọ mụtara, ma ọ bụ kuziere ya, imebiga ihe ókè na omume dị ka a ga - asị na ọ bụ okenye tozuru oke.
Yabụ, ha chọrọ ime,… .. gịnị kpatara ha ji achọ itinye aka na nke a? O yiri ka ọ bụ ihe arụ n'anya na ha chere na ọ bụ ụkpụrụ, (ana m ekwu okwu) na iwu nwere ike ịkwado belata nke a. N'ihi gịnị?
1) N'ihi na ha chere na mgbe nwatakịrị ahụ na-aga ụlọ akwụkwọ, ọ na-abụ onye a machibidoro ya na ya mere nke a na-agbakwunye nchegbu na ịda mbà n'obi nke dịlarị ebe ahụ, na-eme ka ọ kawanye njọ.
2) Ihe nke abuo bu na ha choro ichoputa nchegbu a niile na obi ojoo ha wetaara nwatakiri a, ya na mmekorita nwoke na nwanyi inwe nmeko. Ha chọrọ inyocha nke ahụ na nwatakịrị na ọnọdụ nke ezinụlọ, n'ihi na nsogbu na ndị nne na nna, na m nwere ike ịgbakwunye ya na nne, n'ihi na nke a bụ nsogbu kacha emetụta ụmụ nwoke, ha nwere nnọọ mmasị ile ihe ha anya. bịara kọwaa dị ka mmekọrịta symbiotic nke ọrịa n'etiti nwa nwoke na nne ya. Ma nne ahụ nọ na mkpa mmụọ, ya mere ha chọrọ ileba nwatakịrị ahụ na nne na nna anya ma weta nkasi obi na amamihe na ihe ndị ọzọ niile nke psychotherapy na-eweta.
3) Na mgbe emesiri, ha emeghi okpukpu ihe dika iri abuo ma obu iri ato a gara aga, ha choro igbochi oganihu nwatakiri gabiga ihe okenye dika ndi okenye na nsogbu oria. Anyị maara ugbu a na enwere ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke igbu onwe, ka ihe atụ, na ndị transgender. Yabụ, ha mepere emepe banyere ya. Anyi choro ikwusi nke a ka nwatakiri ahu nwee ike ighota ndi ọgbọ ya ma ya mere ya tolite na nnweko na mmeghachi omume na nmekorita ya na umuaka nke ya, bu nke gha emebi ma oburu na onye obula chere na nwata ahu na eme dika. nwa nwanyi mgbe o bu nwoke n'ezie. Ha kwenyere na usoro mmekọrịta a bụ ihe dị mkpa na mmepe nwata. Nke abuo, ha choro ileba anya ihe kpatara nwatakiri ahu ji nwee obi ojoo ma lelee mmekorita nke ndi nne na nna ma nyere ndi nne na nna aka. Na akpatre, ha chọrọ ịkwụsị transgering.
N’ịkọwapụta ihe kpatara ha ji chọọ ime ya, gịnị ka ha mere? Ọ dị mma, enwere akụkọ banyere ọgwụgwọ omume, psychotherapy, ndụmọdụ nne na nna, ọgwụ ezinaụlọ yana ọgwụ otu. Ndị a bụ ụzọ ọdịnala nke a ka na-arụrụ ọrụ maka nsogbu ndị ọzọ metụtara mmụọ, mana ugbu a gọọmentị chọrọ imebi ha n ’ọnọdụ nwatakịrị nọ na-agbagha ihe gbasara nwoke na nwoke. Gọọmentị na-atụ ụgwọ maka ebubo mpụ maka ojiji nke teknụzụ teknụzụ maka ụmụaka na-echegbu onwe ya na ndị mụrụ ya.
Ma, ajụjụ bụzi, ““ rụrụ ọrụ n’oge ochie? Ọ bara uru? Gịnị sikwa na ya pụta? ” Ọfọn, mgbe ị na-eleghachi anya wee gụọ ị nwere ike ịhụ na enwere nsogbu na nyocha nke nsonaazụ, nke yiri nsogbu nke nyocha nke ndị na-eji ụzọ ahụike nke mgbanwe, ndị na-egbochi, homonụ nwoke na nwanyị na enwere ike ịwa ahụ. Enwere otu ntụpọ na nyocha sayensị. Ndị otu na-ekwu na nyocha sayensị ya. Ọ bụghị nyocha sayensị. N'ihi gịnị? Maka na omumu omumu na nke ngwucha adighi ike site na onu ogugu umuaka. Enweghị njikwa. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ị na-anwa imetụta otu, mgbe ahụ ị ga-ejikwa otu ndị nkịtị na-achịkwa ya, ị na-ejikwa otu ọgwụgwọ ahụ. Enweghị njikwa na nke a, dịka enweghị njikwa ọ bụla taa.
Obere oge nke chọpụtara. Ugbu a nke ahụ metụtara nsonaazụ kachasị, nsonaazụ ebubo, sitere na ụlọ ọgwụ dysphoria okike na ụwa niile n'ihi na ọ malitere naanị na 1998. Nke ahụ kachasị, na nwatakịrị ahụ malitere, afọ iri abụọ. Ha elebeghị anya n'oge oyi na nke owu na-ama ha, nke siri ike nke ntorobịa na gafere. E nwere ihe a Factoring mgbe ha na-ekwu na ọ na-arụ ọrụ. Nsonous pụta. Kedu otu esi atụ obi ụtọ? Ọtụtụ ndị mmadụ na-atụ aro ụzọ ọhụụ a dị mkpa iji gboo ọgwụ na-ekwu maka obi ụtọ na-abawanye. Kedu otu esi atụ obi ụtọ? Kedu ka esi ele mmetụta dị egwu? Ọgwụgwọ ma ọ bụ nlebara anya niile nke a na-enye usoro niile, nke ahụ ọ na-eme nwatakịrị ahụ obi ụtọ? M ga-ekwu na mgbe ha na-ele nsonaazụ nke ụlọọgwụ dysphoria okike, lee nwatakịrị na-enweghị obi ụtọ, nwatakịrị na-enwe nsogbu. Site nha niile, ụmụaka ndị a na - enwe nsogbu mmụọ na mberede, ha na - elebara anya nke ọtụtụ ndị toro eto, ndị dọkịta na ndị na - agwọ ọrịa na mmadụ niile na ndị mgbasa ozi na ihe ndị ọzọ, nke a na - agba ha ume. Ugbu a nke a bụ okwu na-agbagwoju anya, ma otu osila dị, ọ dị mkpụmkpụ n'ihi na dịka anyị kwurula, kedu ihe na-eme n'oge oyi na oge owu na-ama mmadụ.
Nsogbu nke ozo, ya na ihe ndia, bu ihe nlere anya. Ihe m na-ekwu bụ na ndị mmadụ na-ekwu na o yiri ka ha kwụsiri ike. Kedu ka ị ga-esi tụọ nke ahụ?
Na, n'ikpeazụ, ndị na-ekiri ihe na-ezighị ezi ebe onye na-eme nchọpụta na-ekpe ikpe ọrụ ya? Ugbu a nke a bụ ihe na-eme na gọọmentị kwụrụ ụgwọ, nke a na-akpọ ọrụ nyocha, na nsonaazụ ọgwụgwọ dysphoria ụmụ nwoke na Australia na America. Yabụ, ị nwetala ndị nyocha ahụ, ndị na-eme ọgwụgwọ a na-enyocha ọgwụgwọ ahụ. Anaghị m atụfu ebe ọ bụla. Ana m ekwupụtara ha nnukwu ochicho, obi ọmịiko, iji dozie nsogbu a.
Ọ dị mma, yabụ ka anyị lelee ụfọdụ nsonaazụ ya. Nke mbụ, anyị kwesịrị ịsị na usoro ọgwụgwọ ndị a n'oge gara aga mechara bụrụ njedebe nke biopsychosocial nke ihe kpatara ya. Ha si ụzọ atọ na-erute ya nso.
Logicalzọ usoro ndu, ụzọ a na-ahụ maka mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ha na-elekwa anya na ihe dị na nwata nke nwatakịrị ahụ, ebe a na-eme ka ndị mmadụ mara ihe ga - eme ka ihe ka njọ. Na njedebe, ọ malitere na ndị mmadụ na-atụle ihe kpatara dysphoria nwata dị n'okpuru isiokwu nke ihe ọmụmụ biopsychosocial.
Ugbu a bio, enwere mmetụta ndu? Ndị mmadụ na-achọsi ike igosi na ọ bụ ihe na-akpata ọrịa. Mana enweghi nnukwu ihe akaebe na umuaka a ghagburu onwe ha banyere okike ha n'ihi na ha nwere ihe ojoo banyere bayoloji ha. Uyarade idụhe iban̄a oro.
Ọrịa. Ka ọ dị ugbu a, tupu 1998 ka ọ dị ugbu a, a ghọtara ụmụaka na ha nwere nsogbu mmụọ. Anyị elebawo anya na nke a na mbipụta ndị gara aga. Echere m, pasent iri asaa na ise nke ụmụaka na ederede na nso nso a site na Paediatrics Amane Journal si United States, e nyere pasent iri asaa na ise ka ọ bụrụ ihe nyocha. Pasent iri na ise n'ime ha bụ n'ezie, nọ n'ụlọ ọrụ psychiatric. Yabụ, dịka ọ dị na mbụ, ugbu a amatala na ụmụaka ndị a nwere nnukwu nsogbu, ụmụaka na-echegbu onwe ha ma ha chọrọ ọmịiko anyị. Enweghị ajụjụ banyere nke ahụ. Otú ahụ ka ọtụtụ n'ime ndị mụrụ ha dị, mgbe ha leghachiri anya azụ, na karịsịa mmekọrịta mmekọrịta a na-enwe mmekọrịta n'oge ahụ n'etiti nwa nwoke na nne. Ugbu a gịnị mere m ji sị, “ụbọchị ndị ahụ”? Maka n’oge ahụ ọ kachasị ụmụaka nwoke. Ọ dị iche ugbu a mgbe ọ kachasị bụrụ ụmụ agbọghọ na-eto eto na-emetụta. Na m ahụmahụ nke ịgwa ndị nne na nna okwu, ọ dị ka ọ bụ mmekọrịta mmekọrịta na nne. Ndi nne a na-atu ujo site na nke a, mana o bu udi ihe omuma, nmekorita, nmekorita nke Intanet, dika a gbara m ume ka agbakwunye, site na nke a na-akpọ mmemme programslọ Akwụkwọ Nchedo na ihe ndị ọzọ. Ihe niile dị mma, yabụ azụmaahịa uche, ụmụaka na-esogbu, ndị nne na nna nwere nsogbu na enwere mmekọrịta enweghị obi ụtọ, enweghị ọgwụgwọ, nke na-enweghị isi, na mmekọrịta mbibi dị n'etiti nne na nwa ahụ n'ọtụtụ n'ime okwu ndị a.
Yabụ, azụmaahịa mmekọrịta mmadụ na ibe ya? Dị ka ọ dị n'oge ahụ, ya mere ugbu a, ọtụtụ mgbe, enwere nnukwu nrụgide ezinụlọ na nna na-anọghị ma ọ bụ nna dị anya. Echere m na n’ime afọ iri abụọ gara aga, alụmdi na nwunye na-etisasị karịa ka ha dị n’ime afọ asaa na iri asatọ. N’ihi ya, ndakpọ ezinụlọ na enweghị ezigbo ihe nlereanya nke nna, ma ọ bụ mmetụta nna na ihe ndị ọzọ dị mkpa ọbụna karị. Ma enwekwa nsogbu ndụ ndị ọzọ, dịka ịda ogbenye na ihe ndị ọzọ. Yabụ, ha na-elele ihe ndị a ma ha wepụta usoro ọgwụgwọ dị iche iche. Ka anyị were otu n’ime ha. Anyị enweghị ike ịnagide ha niile. Ma ha adịghị ọtụtụ maka na nsogbu ahụ bụ, n'eziokwu, adịkarịghị ụkọ.
Ọgwụ omume na-agba ume ka amata onye dị omimi na nwa agbọghọ ahụ nwere mgbagwoju anya na ihe e chere na ọ bụ nke oke, yana ụgwọ ọrụ nke mere na, ọ bụrụ na ọ na-eji ejiji dị ala, ọ ga-enweta ụgwọ ọrụ. Ugbu a ndị mmadụ ekwuola na nke a nwere ike ịmanye nwatakịrị ahụ ahụhụ ma nye ya ntaramahụhụ ma ọ bụrụ na ọ chọrọ iyi akwa. N'ime nke a, a nyochawo m ya nke ọma n'ihi na ndị otu na-ekwu na ihe ndị a bụ mmanye ma na-emebi emebi ma na-ata ahụhụ. N'ime otu n'ime ndị a achọtara m kemgbe oge 1970, na-alaghachi, ọ dịghị nke ọ bụla n'ime ha kwuru okwu a na ị ga-ata nwata ahụ ahụhụ. Would ga-agba ume ịkpa oke bụ nke ha, ha hapụrụ nke nwanyi, akụkụ nke nwanyị, n'enwetaghị ntaramahụhụ.
Dịka ọmụmaatụ, Rekers dịka ọmụmaatụ, onye bụ onye na-agwọ ọrịa mmụọ na America, bipụtara ọtụtụ ebe na nke a. Otu n'ime edemede ya dị na 1985 ma ha soro ụmụaka iri ise. N'agbanyeghi na enyere ya ihe isi ike nchoputa na nyocha ihe omimi nke sayensi, nke na-anoghi ya na ihe gbasara umuaka a, Rekers na-ekwu otu a, m na-ekwu, ““mụaka iri ise ka a na-ahụ anya na nsonaazụ na-enye echiche,” m na-ekwu ọzọ, “mgbanwe dị iche iche na-adịgide adịgide na njirimara nwoke na nwanyị nke a mụrụ ya.” Ọ gakwara n'ihu kwuo na ọ bụrụ na ụbụrụ na-agbatịkwu ogologo oge, na-abawanye uru omume, na-aka arụpụta ya.
Onye ọzọ, m na-ehota ugbu a, lere anya na usoro ọgwụgwọ metụtara mmekọrịta ezinụlọ dum wee kwuo, sị, “Ọtụtụ ụmụaka na ndị ezinụlọ ha nwetara nnukwu mgbanwe.” Mana enwere mmachi ụfọdụ na nke a, n'ihi na agbanyeghị na enyere nwatakịrị ahụ ohere iyi akwa, edobere mmachi na omume akwa akwa. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, "can nwere ike iyi uwe gburugburu ụlọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ, mana anyị agaghị eyi ya na nnukwu ụlọ ahịa ma ọ bụ na anyị agaghị eyi ya na nne nne m na ndị ọzọ." Yabụ, ọ bụrụ na enweghị mgbochi, yana ọ bụrụ na nne ma ọ bụ nna ahụ na-ekwenye na azụmaahịa niile, yana njọ karịa na-agba azụmahịa ahụ dum ume, mgbe ahụ ọ nweghị mgbanwe na nghazi. Yabụ, ọrụ a kachasị eme na America. Ihe niile dịịrị gị ka ị gụọ ma ọ ga - egosi na nke a dị irè. Nọmba ndị ahụ pere mpe ma ọ bụ mmetụta dị mma na enweghị m ike ịhụ ihe akaebe na ọ mere mmerụ ahụ ọ bụla. Ugbu a gịnị kpatara Laborlọ Ọrụ Labour kwesịrị ịpụ n'ụkwụ wee kwuo na nke a na-emerụ ahụ. Enweghị ihe akaebe na akwụkwọ ndị ahụ.
Ihe a m na-ekwu ugbu a juru m anya. Ahụrụ m otu edemede edere na 1987 nke otu onye ọzọ aha ya bụ Robert Kosky. (Ref 1) Amaghị m ya, mana ọ bụ onye isi ndị isi mgbaka nwa na Princess Margaret Hospital dị na Perth n'oge ahụ yana Chief Child and Adolescent Psychiatrist maka steeti Western Australia ma dee akụkọ na 1987, bipụtara na ahụike Akwụkwọ akụkọ Australia. Ihe mbụ na-adọrọ mmasị bụ na ha mụrụ ụmụ asatọ. E gosipụtara ụmụaka asatọ n'etiti afọ 1975 na 1980. asatọ n'ime afọ ise! Ugbu a, ọ bụrụ na ị lelee ebe nrụọrụ weebụ ahụ, dịka m mere, otu ụlọ ọrụ ahụ edegharịrị aha na Perth nwere okwu abụọ ma ọ bụ atọ kwa izu na ndepụta ndenye ihe dịka otu narị na iri ise.
Ọ dị mma, yabụ kedu ihe na-eme ụmụaka ndị a, gịnị kpatara eji eweta ha? Maka na ha na-eyiri uwe ma na-emetụta omume nke ndị toro eto na-abụghị nwoke ma ọ bụ nwanyị ibe ha. Nke ahụ bụ ihe m na-ekwu na mbụ. “Nwatakịrị a na-emetụta ije ije nwanyị, na-emetụta omume ụmụ nwanyị, na-eyi lipstick na mbọ mbọ, site n’ihe ndị a niile ọ na-e mimomi okenye. Ugbu a, ọ na - ekwu ndị a, dị ka Kosky si kwuo, na ha enweghị mmasị na akụkụ ahụ ha na ha chọrọ ịbụ onye na-abụghị nwoke ma ọ bụ nwanyị ibe ha. Ma n'ụzọ ụfọdụ ma ọ bụ ndị ọzọ, ụmụaka ndị a mụtara ịkpa àgwà, na nkezi afọ asatọ ha bụ, ha mụtara ime ka ụmụ nwanyị toro eto na-enwe mmekọahụ.
Yabụ kedu ihe ha chọpụtara na terapi? Ha chọtara, m na-ekwupute, "Omume ọdịiche ahụ abụghị naanị, ma ọ bụ n'ezie nsogbu kachasị maka ụmụaka. Obi erughị ala, nchekasị, echiche igbu onwe ya, iwe ike na ọdịda ịmụ n'ụlọ akwụkwọ bụ ihe ụfọdụ n'ime ọtụtụ. Na njirimara nke akparamaagwa nwoke na nwanyi gosiputara nke abuo na enweghi obi uto nke nwata, nke abuo na nmekorita nne na nna na umu aka nke putara n’izu ha nke terapi.
Kedụ ka usoro ọgwụgwọ mmụọ si wee pụta? Anyị kwesịrị ịkọwa na-etinye ụmụaka n'ime ụlọ ọgwụ, n'eziokwu, ebe ha nọrọ nkezi nke izu iri na abụọ ma ọ bụ iri na anọ n'ụlọ ọgwụ na ndị mụrụ ha na-anata usoro ọgwụgwọ ahụ kwa izu.
Ndị nne na nna nwere ohere ịnweta ụmụaka, ohere zuru oke na mmekọrịta mmekọrịta na mmemme mmekọrịta nke na-eme n'ụlọ ọgwụ. Ugbu a, ha anaghị ata nwata ahụ ahụhụ maka ịbụ nwa agbọghọ mgbe ọ bụ nwata. Ha na-emeso nwatakịrị ahụ ihe dị ka ihe nkịtị, dị ka a ga - asị na enweghị dysphoria okike nwere naanị nkwenye abụọ. Nke mbu, oburu na nwatakiri choro ichota ya, mgbe ahu o ghaghi, na ahia nke ejiji, kwanyere obi umeala nke umuaka ndi ozo. Onweghi otu n'ime oke a nke ime ụlọ ịwụ, ụlọ mposi na ndị ọzọ nke mere na anyị batara n'oge ndị a. Ha kwusiri ike na a na-asọpụrụ obi umeala nke onye na-abụghị nwoke ma ọ bụ nwanyị ibe ya nakwa na ọ dịghị izu ohi nke uwe ndị ọzọ. Ha nwere ike ejiji ma ọ bụrụ na ha chọrọ iyi uwe. Na ngwụcha ihe Kosky dere bụ na ọgba aghara dị mkpa na ọnọdụ a, bụ enweghị ike nke nne na nna nke onye na-abụghị nwoke ma ọ bụ nwanyị ibe ya ịnabata nwa ahụ belụsọ na ndabere ọnọdụ nwa ahụ zutere ụfọdụ mkpa nne na nna. Mkpa uche. Nne ma ọ bụ nna gọnahụrụ mmekọrịta nwoke na nwanyị, sị, “Ọ bụghị nwata, ọ bụ nwanyị.” ma gbaa ha ume banyere echiche ndị na-abụghị nwoke ma ọ bụ nwanyị ibe ha. Nke a bụ ebe nwatakịrị ahụ nọ na-amụta emetụta omume nke okenye.
Ugbu a, mgbe nwatakịrị ahụ nakweere omume ndị a, dị ka Kosky si kwuo, nne ma ọ bụ nna ahụ gbanwere site na mmekọrịta oyi, na-arụ ọrụ na-arụkọ ọrụ ọnụ, gaa n'ịhụnanya na ịhụnanya. Ọfọn, ya mere ọ gara n'ihu ịkọwa na nne nwere nsogbu, ọ na-ewute ya, o merụrụ ahụ, ikekwe site na nna dị anya ma ọ bụ nna na-anọghị ya. Yabụ, ọ bụghị ya niile ji obi nwoke na nwanyị nwee mmekọahụ. N’uzo ozo ma obu ozo, o choputara na ichikota nwatakiri ahu n'uwe nwanyi site na nmalite, obuna abuo ma obu ato, nuzo ma obu ndi ozo nka bu ezigbo ihe nke gakwara niru na nne hutara na ya na nwatakiri ahu agha karit. Nwatakịrị nwanyị, dị ka a pụrụ isi kwuo ya, nwere ike ịhụ, ebe ụmụaka maara ihe na nke a, na omume a mere ka mama nwee ihu. Yabụ, mmekọrịta mmekọrịta mmekọrịta mmekọrịta n'etiti mmadụ abụọ ahụ, jiri nwayọ nwayọ na-akawanye njọ ka afọ na-aga.
Ọ dị mma, gịnị meziri? Ha tinyere ụmụaka n’ụlọ ọgwụ. Kedu ihe mere? Nke a dị ịtụnanya. M na-ekwu. Cross Kwụsị uwe na-akwụsị ozugbo. ” Ekwu. “Otutu n’ime agwa ndi ozo di iche-iche nke nwoke na nwanyi, nke ha no na otutu oge, lara n'iyi mgbe otutu izu gachara. Mgbanwe ndị dị otú ahụ nwata ahụ mere wutere ndị mụrụ ha niile. Otu nne na nne nne mebiri usoro ihe omume ahụ n'ezie site n'iwebata nwa ahụ uwe. ” Nke a bụ ihe ịma aka mmekọrịta mmekọrịta ahụ. Otu n'ime ndị nne gbapụrụ nwa ahụ n'ezie, ha anụghịkwa banyere ya ọzọ.
Ya mere, gịnị mere mgbe ahụ? Ha sooro umuaka ndia. Gịnị mere ha? Ọnọdụ ụlọ ọgwụ ahụ, dịka m kwuru, bụ nkezi nke izu iri na asatọ. Ma obu m nwere ike ikwu iri na ano tupu. Ana m agụ ya ugbu a, izu iri na asatọ ya. Ọnọdụ ụlọ ọgwụ sitere na izu iri ruo izu iri abụọ na atọ, yana nkezi nke izu iri na asatọ. Ndị nne na nna natara nlekọta ahụike, nlekọta uche, otu ugboro n'izu.
Otu afọ ka e mesịrị, ha chọpụtara na otu nne na-emebi mmekọrịta ahụ site na ịnye uwe akwa. Themụaka ndị ọzọ anaghị aka uwe ma ọ bụ na-achọ ịkpa àgwà dị ka ndị okenye nwere mmekọahụ. Mgbe ihe dị ka afọ iri gachara, otu nwa nwoke nwere ike nwoke idina nwoke. Ọ gbagwojuru anya. Ma, m na-ekwu, "Ọ dịghị onye ọ bụla n'ime ụmụaka ndị ọzọ, ugbu a ndị na-eto eto, kwuru mmetụta ndị na-edina ụdị onwe ha, bụ ndị na-agafe ma ọ bụ ndị na-enwe mmekọahụ."
Yabụ, m nwere ike ịgbakwunye na akụkọ ndị ọzọ sitere na America gosiri na enwere ụmụ nwoke n'ezie, dịka ha kọwara ha, ọ bụ nnukwu nsonaazụ nwoke na nwanyị ma ọ bụ ya bụ ihe ndị mmadụ na-ekwu ụbọchị ndị a. Ọ bụghị m, ndị mụụrụ ihe a ọtụtụ afọ, na-ekwu na ihe ka ọtụtụ ụmụaka, pasent iri asaa ma ọ bụ iri asatọ, ga-alaghachi n'eziokwu na njiri mara nwoke na nwanyị a mụrụ ha. N’aka ozo, laghachi na nmekorita nwoke amuru ha ma buru nwoke ma obu ndi nwoke. N'ime ndị ka dị ole na ole, ọtụtụ n'ime ha na-edina ụdị onwe ha ma ka na-eme ka a na-enwe mmekọahụ nwoke. Naanị obere pere mpe ka ga - ejikọ ịkpa oke, transgender, siri ọnwụ.
Dịkwa mma, kedu ihe Kosky chịkọtara mpempe akwụkwọ a dị ịtụnanya, nke ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị kwesịrị ịgụ, ikekwe ndị sitere na Western Australia n'ihi na ọrụ a sitere na steeti ha, mana ndị gọọmentị Federal Labour na-achọ imebi ụdị mmụọ ahụ, psychotherapy. ntinye aka. Gịnị ka Kosky mụtara?
1) see okwu. “Ọ bụrụ na anyị ekwubiga okwu ókè n'ihe ọmụmụ banyere ihe ndị dị ndụ, ọ pụrụ ịkpata enweghị nchekwube nke ọgwụgwọ.” Gịnị ka ọ na-ekwu ebe a? Echiche a bụ na etu nwa ahụ si dị, amụrụ nwa ahụ n'ahụ na-ezighi ezi, ị nweghị ike ịgbanwe ya, ya mere anyị ga-agbanwe ihe maka ya. O kwuru nke a, o kwenyeghị na nke ahụ. O wee kwuo na nrụgide a na-enweghị atụ banyere azụmahịa, nke na-akpata, enweghị ike ịgbanwe agbanwe, na-agbanwe agbanwe nke azụmahịa na-eduga n'enweghị olile anya. Ugbu a, nke ka njọ, ugbu a ọ na - eduga ịbanye na ụzọ ahụike, yana nsogbu ya niile na - elekọta ya na ndụ ahụike ya niile. Nke ahụ bụ ebe enweghị olile anya na enweghị ike mgbanwe na-eduga n'oge a.
2) Kedu ihe ọzọ ọ mụtara? Ikwusi ike na ezinụlọ na mmekọrịta mmadụ na ibe ya kwesịrị ime ka ekwusi ike na-enweghị isi na omume aber n'onwe ha. Gịnị ka ọ na-ekwu ebe a? Ọ na-ekwu, mma, nwatakịrị ahụ kwuru na ọ bụ nwa agbọghọ na ọ bụghị. Ma ọ na-eji ejiji dị ka nke a. Ọ na - ekwu, ihe ndị a bụ ihe nke abụọ kpatara nsogbu na - akpata nwatakịrị na nsonye biopsychosocial. Ma ọ bụrụ na itinye aka na nsonye biopsychosocial, enwere ike ịtụ anya ihe ndị a dị mma. Dị ka n'ezie, Kosky hụrụ.
3) Right, gịnị ọzọ? Ihe nke ato, "Ihe akparamagwa nwoke na nwanyi mere ka o bu," ihe m na - ekwu, "ngosiputa a na - aghaghi oke nke nmekorita mmadu na - akpaghi anya na oke izu oke nke mmekorita nke ndi nne na nna na umu aka." . O nwere ike ịbụ nwanyị a gbahapụrụ agbahapụ, merụọ ahụ, adịghị ike, nne na-ata ahụhụ. Gịnị banyere nwatakịrị ahụ? Kedu ihe ị na-ekwu ebe a? Nwatakịrị, mgbe ị gara n'ihu na nkwuputa mmekọrịta a ebe a, "are bụ nwa agbọghọ n'ezie," ọ na-efunahụ ụkpụrụ nduzi nke ntozu oke nke mmekọrịta mmadụ na ụmụ nwoke na nwoke.
Ọ dị mma, yabụ olee ebe ihe a niile na-eduga? Ọfọn, nke a niile na-eduga ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị ebe a, anyị ekwuolarị na "A Fair Go For Australia." Nke a bụ usoro ikpo okwu nke ugbu a, ha na-achọ imebi ihe bụ usoro ọgwụgwọ doro anya n'afọ ndị gara aga. Ihe ha ga - eme ugbu a bụ ime ka nwatakịrị ghara ịdaba na ụzọ ahụike. Mụ onwe m, dị ka dibia bekee, ga-emebi iwu ma ọ bụrụ na anaghị m amanye nwa ahụ ma ọ bụ ziga nwa ahụ nrụgide na anyị ga-eme ya. Ọ bụrụ na emeghị m ihe ọ bụla, m ka ga na-emetọ ụmụaka. Enweghị ụzọ gburugburu ya.
Enwere m, n'okpuru ntaramahụhụ mpụ site na iwu ndị a, iduzi nwatakịrị n'ụzọ ọ bụla na mgbagwoju anya okike nwatakịrị ahụ, ị ​​na-elele Web, ị na-elele ihe ndị ọzọ ụlọ akwụkwọ nchekwa dị mma ebe ị nwere ike ịbụ ụdị okike a, ụdị okike, ụdị nwoke a, ihe ịchọrọ, ugboro ole ịchọrọ. N'izi, m ga - enwe ike izipu nwatakịrị ahụ n'akụkụ ahụ. M ga-eme mpụ ma ọ bụrụ na achọrọ m iji usoro ọgwụgwọ mee ka nwatakịrị ahụ laghachi na nwoke ma ọ bụ nwanyị a mụrụ ya.
Ego gini? Ọnụ ego a na-eziga ụmụaka ndị a mgbe ahụ n'ụzọ ahụike nke ịdabere na ahụike maka oge ndụ ha niile na ọgwụgwọ hormone, nke anyị maara na ọ ga-emetụta ụbụrụ ha. Dị ka ọ dị, anyị na-eche na ọ bụrụ na ị nwere ike igbochi nwatakịrị ịbanye na ndụ nke ọgwụ na nlekọta ahụike na nkenke pụta ụwa na ikekwe ịwa ahụ, enwere ike ịwa ahụ, na-echekarị na ọ ga-abụ ihe magburu onwe ya. Mana maka ịgbalị igbochi nke ahụ site na ịgighachi akụkọ ochie ndị a banyere ịdị adị nke omume mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ọgwụgwọ omume na ihe ndị ọzọ, aga m eme mpụ.
Oge eruola mgbe ndị ndọrọndọrọ ọchịchị bidoro nweere onwe ha igbochi echiche nke na-ekwu na enweghị ihe dịka nwatakịrị nwoke na nwatakịrị nwanyị. Ha kwesiri ịlaghachi ma gaa leta usoro ọgwụgwọ eji emebu. Ha kwesịrị ịtọhapụ ma mụbaa echiche nke psychotherapy dịka ọmụmaatụ, ọgwụgwọ omume, ọgwụgwọ ezinụlọ, agaghị agafe iwu nke ga-atụ ndị na-eme ọrụ ụjọ ịgbachi nkịtị nke mere na naanị ihe ọzọ bụ ụzọ ahụike.
Ref 1: Dr. Robert Kosky. Gmụaka Nwere Nsogbu. Ọ Na-enye Ọgwụgwọ Inpatient Inyeaka.
Vidio 12 - Dysphoria nke Childhoodmụaka Gender - Nhọrọ Ndị Ọzọ Na-agwọ Ọrịa. Pịa> Iji budata PDF ebe a.
Vidiyo a na iri na otu ndị ọzọ na Childhood Gender Dysphoria, yana ozi ndị ọzọ ị nwere ike ịchọta na weebụsaịtị anyị.